Izinsizakalo ze-CNC Machining, Izingxenye Zomshini we-CNC, Izingxenye Zensimbi ze-CNC - BXD
Izinsizakalo ze-CNC Machining
Izingxenye ze-CNC zensimbi
Izingxenye zePlastiki ze-CNC
5 Axis CNC Izingxenye
Umakhi wensimbi Izingxenye
Izinsizakalo ze-CNC machining (3-, 4- & 5-Axis) zezingxenye zokunemba okuphezulu zokukhiqizwa kwevolumu ephansi.
Uhla lwethu lwezinsizakalo ze-CNC zokugaya lunganikeza izingxenye zokunemba zephrojekthi yakho.
Uhla lwethu olubanzi lwe-CNC lathes kanye nezikhungo zokujika kuzokuvumela ukuthi ukhiqize izingxenye eziyinkimbinkimbi eziphendukile.
UKUGQOKWA KWESIMISI SAMASHISHINI
Izinsizakalo kufaka phakathi ukusika kwe-laser, isibhakela, ukugoba, ukucindezela i-rivet nokushisela, njll.
Ishidi Ngokwezifiso Amandla Amandla Ibhokisi Abakaki ngegolide ...
Aluminium Ingxubevange 6061 CNC Izingxenye Zensimbi Zekhamera ...
Aluminium Ingxubevange 6061 CNC Izingxenye Turning Ukuze Lithi ...
CNC Machining Izingxenye Galvanometer Ibhokisi UV ...
Isebenza kanjani iBXD
Layisha imidwebo yakho
Iminyaka engaphezu kwengu-10 yokuhlangenwe nakho
I-BXD kusukela ngo-2010, onjiniyela bethu bebehlinzeka ngemisebenzi ye-CNC machining iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi bakhe ulwazi olucebile oluvela kumaphrojekthi amaningi wangaphambilini, singakwazi ukusingatha izingxenye eziyinkimbinkimbi nokunemba ngaphandle kwenkinga.
Impendulo esheshayo, ukulethwa ngesikhathi
Ngokwesilinganiso sibuyisa izingcaphuno kungakapheli amahora angama-24, izingxenye zithunyelwa zingakapheli izinsuku eziyi-7 noma ngaphansi, futhi sinezidingo ezingama-99% ngesikhathi nezinga lekhwalithi.
Imishini ephelele, isisombululo esisodwa
I-BXD inemishini ephelele yokukhiqiza nokuhlola. Sizokunikeza izinsiza zokumisa okukodwa kusuka ezintweni zokusetshenziswa ukuqeda imikhiqizo.
Imboni yethu i-ISO9001: 2005 ingumkhiqizi oqinisekisiwe wemikhiqizo esezingeni eliphakeme
Silandela izinqubo eziqinile zezingxenye zakho zihlala zihlangabezana nezindinganiso ezisezingeni eliphakeme kakhulu.
Siqinisekisa ukuvikelwa kwe-IP yakho
izingxenye zesiko manje
Sicela ushiye kithi futhi sizothintana kungakapheli amahora angama-24. Konke okulayishiwe kuphephile futhi kuyimfihlo
5 Axis Machining izingxenye eziyinkimbinkimbi
Yini i-CNC 5 Axis machining futhi yiziphi izinzuzo? Eminyakeni yamuva, ama-axis amahlanu e-CNC machining asetshenziswe kakhulu ezindaweni eziningi. Ekusebenziseni okusebenzayo, lapho abantu behlangabezana nokusebenza kahle nokusebenza kwekhwalithi ephezulu kwe-par ekhethekile emise ...
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi ye-BXD
Ikhwalithi yisiqinisekiso esiqinile sokuthuthuka kwenkampani, kusobala ukuthi ukucutshungulwa kokukhiqiza kuyisihluthulelo sekhwalithi yomkhiqizo, ukuhlolwa kuyisiqinisekiso semikhiqizo. I-BXD ilandelwe ngokuqinile i-SOP ngenqubo yokukhiqiza. Imikhiqizo yethu ezinzile nefanelekayo ...
Thola umkhiqizi we-CNC machining e-China
Thola umkhiqizi we-CNC machining e-China BXD ifektri engu-11 yobungcweti ye-CNC e-Shenzhen China, sinikela ngezinsizakalo e-China cishe iminyaka eyi-11 futhi sinamakhasimende athile e-USA, Singapore, Malaysia, UK njll ezindaweni ezahlukene izimboni. Siyethemba...
I-BXD inokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-10 ekukhiqizeni izingxenye zokwenziwa kwe-CNC ngokwezifiso, sizibophezele ekuhlinzekeni ngezinsizakalo ezinhle kakhulu ze-CNC.
F1, Isakhiwo A, iZhongyuan Industrial Area, iDalang Road, Isifunda saseLonghua, Shenzhen, Guangdong, China
Ucingo:+86 177 2781 0685